Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Duqeyn lagu laayey caruur fara badan oo ka dhacday Dugsi kuyaala wadanka...
August 22 2017 00:50:47
Duqeyn lagu laayey caruur fara badan oo ka dhacday Dugsi kuyaala wadanka...
Dayuuradaha dagaalka Isbaheysiga Sacuudigu hogaamiyo ayaa duqeyn caruur badan lagu laayey ka geystay gobolka Sacda ee wadanka Yemen Sabtidii shalay.
Heyadda MSF ayaa sheegtay in gantaal ay soo rideen dayuuradaha isbaheysiga uu ku habsaday dugsi caruurtu ay ku bartaan Quraanka oo ku yaala magaalada Haydan ee gobolka Sacda.
Afhayeen u hadashay heyadda MSF ayaa sheegtay in ugu yaraan 10 caruur ah ay ku dhinteen duqeyntan, halka 28 kale ay ku dhaawacmeen, iyadoo dhacdadan lagu tilmaamay Jariimad fool xun oo maatada lagu laynayo.
Maalmo ka hor ayey aheyd markii dayuuradaha Sacuudiga oo duqeymo ka geysanayey magaalada Sanca ay gantaal ku dhufteen warshad sameysa raashiinka, halkaasoo ay ku naf waayeen 15 ruux oo ka tirsanaa shaqaalaha warshadaas.
Dayuuradaha Sucuudiga ayaa horey loogu eedeeyey inay duqeeyeen Isbitaal ay maamusho MSF oo ku yaalla isla magaalada caruurtan lagu diley, waxay sidoo kale duqeeyeen iskuulo iyo xero dad ku barakacay dagaalada ay deganayeen.
Isbahaeysiga Sacuudigu hogaamiyo ayaa bilowgii sanadkii 2015 bilaabey duqeynta dhanka cirka ah ee ay ku hayaan dhulka ay ka qabsadeen falaagada Xuutiyiinta ee ay taageerto IRAN ee qabsatey inta badan magaalooyinka dalka Yemen, waxaana QM ay sheegtay in duqeymaha sacuudiga lagu dilay ugu yaraan 7,000 oo ruux kuwaasoo rayid u badan.
· Caydiid on August 14 2016 ·